အိုးထရက်ဖို့စ်ကွင်းထဲက တောက်ပလာသော ကြယ်သုံးပွင့် – FBV SPORT NEWS
ကျနော်တို့ မန်ချက်စတာယူနိက်တက်ကတော့ ဝေဖန်မှုတွေ အပြစ်တင်မှုတွေကြားထဲကနေ ထိုက်တန်သော အနိုင်ယူမှုကို ကြယ်သုံးပွင့်နဲ့အတူ အိမ်ကွင်း မှာ ချန်ပီယံလိဂ် ပွဲအဖြစ် အက်စတန်ဘူကိုလက်ခံကစားပြီးတော့ ၄-၁ ဖြင့်ပြတ်သားသော အနိုင်ရလဒ်ကို ရယူခဲ့ပါတယ်…
မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်စ် အတွက်ယခုပွဲမှာ ခြေစွမ်းတက်လာသော အထိုင်ကျလာသော ပုံမှန်ထက်ပိုပြီးတော့ ရုန်းအားကောင်းလာတဲ့ ကစားသမားတွေရယ် အသင်းလိုက်စုဖွဲ့မှုအားကောင်းလာပြီး တောင်ပံတွေရဲ့ လုပ်ရှားမှုတွေ ဟာ ပိုမိုကောင်းမွန်လို့လာပါတယ်….အသင်းသားတွေအားတက်အောင်လို့ ကျနော်တို့ နည်းပြဟောင်းကြီး ဆာအဲလက်စ်ဖာဂူဆန်လည်းလာကြည့်နေခဲ့ပါတယ်…..
အဲ့ဒီတော့ ယခုပွဲထဲမှာတောက်ပလာတဲ့ကြယ်သုံးပွင့်ကို SPTM ရဲ့ ခန့်မှန်းချက်တွေက နေကောက်နုတ်ပြီးတော့ ယခုလိုဖော်ပြပေးလိုက်ရပါတယ်…
ဘရူနိုကတော့ တောက်ပလာတာထက်ကို ဒီပွဲမှာပိုခဲ့ပါတယ်…. ၂ ဂိုးသွင်းပြီး တော့ ကွင်းလယ်မှာ ဗန်ဒါဘတ်နဲ့အတူ တွဲလုံးတွေကို ဖန်တီးပေးခဲ့တယ်….တောင်ပံတွေကို ဘောလုံးပေးပို့မှုတွေကို အကွက်မြင်စွာဖန်တီးပေးဖို့လာတယ်….ဘရူနိုကတော့ အရင်တည်းက တောက်ပပြီးသားကြယ်တပွင့်မို့ ယခုပွဲမှာသူ့ရဲ့ သွင်းဂိုးတွေနဲ့ အတူ အထူးတောက်ပလာတာကို ပိုမိုမြင်တွေ့ခဲ့ရပါတယ်….
ဗန်ဒါဘတ်ကတော့ အစပိုင်းမှာ ပွဲထွက်ခွင့် မရမှုတွေ နဲ့ အထိုင်ကျပါ့မလား ကစားကွက်နဲ့ အံဝင်ပါမလားဆိုတဲ့ …သို့လော…သို့လော မေးခွန်းတွေပြည့်နေခဲ့ပါတယ်….သိုပေမဲ့ ဒီပွဲမှာ ကွင်းလယ်ကို အကောင်းဆုံးထိမ်းကျောင်းသွားခဲ့တယ်…ဘောလုံးဖြန့်ဝေမှုတွေ အကွက်မြင်မှုတွေ နဲ့အတူ ဂိုးသွင်းဖို့ဖန်တီးပေးမှုတွေကိုလုပ်လာနိုင်ခဲ့တယ်……
ဗန်ဒါဘတ်ကတော့ ဒီပွဲမှာ ဘောလုံးပေးပို့မှုတွေမြန်ဆန်တိကျလာတယ်….အားသာချက်ကတော့ ဘောလုံးကို ကိုင်ထားပြီ ဆော့နိုင်တာက ကွင်းလယ်မှာ နေရာလွတ်ရှာဖို့ အတွက် လွယ်ကူသွားစေပြီးအသင်းရဲ့ ကစားအား Tempo ကို ဆွဲတင်ပေးနိုင်ခဲ့ပါတယ်…..အရင်က မိုက်ကယ်ကားရစ် ကိုပြန်မြင်လိုက်ရသလိုပါဘဲ……
တိုက်စစ်မှူးကြီးကာဗာနီကလည်း ဗန်ဒါဘတ်လိုဘဲ အသင်းမှာပွဲထွက်ခွင့်တွေ ခြေစွမ်းပြနိုင်ပါ့မလားဆိုတာတွေနဲ့ ရင်ဆိုင်နေရင်းနဲ့ ယခုပွဲမှာ ထိုက်တန်သောခြေစွမ်းကောင်းတခုကိုထိမ်းထားခဲ့ပါတယ်…ကာဗာနီကိုအထောင်တိုက်စစ်မှူးထားလိုက်တော့ ကာဗာနီအကြိုက်ကစားကွက်နေရာဖြစ်သွားခဲ့ပြီး
ဂိုးပေါက်ချိန်ခြောက်မှုတွေ ပြုလုပ်တဲ့အကြိမ်တွေမှာ သုံးယောက်ကို ကပ်ယူထားရတယ်အထိဖြစ်လာပါတယ်…အဲ့ဒီအချိန်မှာ တောင်ပံတွေနဲ့ ကွင်းလယ်လူတွေကို ထိမ်းထားနိုင်မှုအားတွေလျော့သွားခဲ့ပြီး ကွင်းလယ်က ဂိုးတွေသွင်းယူပေးနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်….ထိုက်တန်သော ခြေစွမ်းကို အစောဆုံး ကာဗာနီပြသနိုင်ခဲ့တယ်လို့မြင်ပါတယ်…..
ယခုထိုက်တန်သော ခြေစွမ်းပိုင်ရှင်သုံးယောက်ဟာ အိုးထရက်စ်ဖို့စ်ကွင်းထဲမှာတောက်ပလာသော ကြယ်သုံးပွင့် အဖြစ် SPTM အားကစားသတင်းဌာနကနေ ရွေးချယ်ပေးခဲ့ပါတယ်….
ဗန်ဒါဘိဟာ မန်ယူအသင်းရဲ့ပွဲထွက်စာရင်းမှာ ပါသင့်နေပြီလို့ပြောကြားလိုက်တဲ့ အိုဝင်ဟားဂရိ